Sharciga Iibsiga Dadweynaha iyo Rafcaanka Qaranka - Katalus.pl
Uncategorized @so · 8 November 2019
Sharciga Iibsiga Dadweynaha iyo Rafcaanka Qaranka
Soo iibsi dowladeed waa qeyb ka mid ah maaliyadda dadweynaha oo howlahooda loo habeeyay si loo hubiyo tartan cadaalad ah . Iyagu waa inay ka hortagaan nacaybka isla mar ahaantaana dammaanad ka qaadaan adeegyo tayo sare leh oo ku filan. Sidan, adeegsiga macquulka ah ee lacagaha dadweynaha ayaa la hubiyaa. Sida uu dhigayo sharciga Polish, qawaaniinta lagu bixiyo qandaraasyada dadweynaha waxaa lagu qeexay Sharciga 29 Janawari 2004, Sharciga Soo Iibsiga Dadweynaha (Journal of Law of 2018, qodobka 1986).
Mabaadi’da aasaasiga ah ee lagu bixiyo qandaraasyada dadweynaha waa: mabda’a sinnaanta ee loola macaamilo qandaraasleyaasha, mabaadi’da dhexdhexaadnimo iyo ujeedo leh, mabda’a tartan cadaalad ah, mabda’a hufnaanta iyo mabaadi’da nidaamka qoraalka.
Waxay had iyo jeer dhacdaa in soo iibsadayaasha aysan ku qancin natiijada. Markaa Rugta Ganacsiga ee Polish ayaa u gurmata. Waa hay’ad la aasaasay Xeerka 13 Abriil 2007 oo wax laga beddelayo Sharciga Iibsiga Dadweynaha, si loo dhageysto rafcaanka loo soo gudbiyay inta lagu gudajiray habraaca soo iibsiga dowladeed (ka hor inta aan la gaadhin racfaannada 2007 ee ay sameeyeen kooxaha garqaadeyaasha). Kaliya maahan in shirkadihii ka dhacay qandaraaska ay codsi u diri karaan Rugta, laakiin sidoo kale hay’adaha kale ee danaynaya aag la soo sheegay, haddii, tusaale ahaan, ay ku soo kici karaan qarashaad ay sabab u tahay qandaraaska ama ay ka warqabaan wax isdaba marin.
Xuquuqdani sidoo kale waxay qusaysaa ururada qandaraaslayaasha ku qornaa liistada uu hayo Madaxweynaha PPO. Galitaanka ku saleysan qodobada: qolalka ganacsiga, farsamada gacanta, is-maamul xirfadeed qaar ka mid ah ganacsatada, ururada loo shaqeeyayaasha, dowladaha xirfadda leh ee naqshadeeyayaasha, injineerada dhismaha iyo qorsheyaasha magaalada ayaa dalban kara gelitaanka liiska. Galitaanka liistada, diidmada in la galo ama la tuuro liiska waxaa samayn doona Madaxweynaha xafiiska marka loo maro go’aan maamul. Xilligan, liiska waxaa ku jira 148 hay’adood. Kuwani waa Rugta Wershadaha, Farshaxannada gacanta, ururrada injineerrada, loo shaqeeyaha ama naqshadeeyeyaasha, iyo Rugta Ilaalinta Dadka iyo Guryaha Polish.
Rafcaanka Qaranka Rafcaanku wuxuu u dhaqmaa si la mid ah maxkamadda dhexdhexaadinta, go’aankiisana waxaa looga dacwoon karaa maxkamadda gobolka. Rugta ayaa hada ka kooban 48 xubnood oo uu magacaabay isla markaana shaqada ka joojiyay Wasiirka Dhaqaalaha. Xubnaha Rugta ayaa ku raaxeysanaya ilaalinta saraakiisha dawladda marka ay gudanayaan waajibaadkooda ku qeexan Sharciga.
Waxaa xusid mudan muddooyinka gaagaaban ee xereynta rafcaanka. Waxay kuxirantahay nooca kiiska, waxay u dhexeeyaan 10 illaa 15 maalmood. Marka la eego hindisooyin qaddar yar, muddadan waa 5 maalmood oo keliya. Tani aad bay u yar tahay in la soo uruuriyo agabyada ku habboon oo lagana yaabo inay la tashato qareen. Dhanka kale, muddooyin cayiman oo waqti dheeri ah ayaa xayiraya hindisooyin, taas oo curyaamin ku noqonaysa aagag badan oo maaliyaddeed. Kiisaska ka sarreeya marinnada EU, rafcaanka waxaa guud ahaan lagu xareeyaa 10 maalmood gudahood. Mararka qaarkood taariikhda bilawga ee muddadan uma eka taariikhda laga helo macluumaad gaar ah hey’adda wax soo iibsaneysa. Maqnaanshaha macluumaad ku saabsan hey’adda wax soo iibsaneysa, waqtiga kama dambeysta ah waa in lagu xisaabiyaa laga bilaabo maalinta, iyada oo si taxaddar leh, ay suuragal u ahayd in laga warqabo duruufaha aasaas u ah xereynta rafcaanka. Waqtiga rafcaanka waa, si kastaba ha noqotee, illaa lix bilood laga bilaabo taariikhda la soo gabagabeeyey heshiiska, haddii qaababkii loogu baahin lahaa daabacaadda lagu dhawaaqa natiijooyinka qandaraaska lagu qoro joornaalka rasmiga ah ee Midowga Yurub.
Dharka carruurta - sida loo kala sooco, maxay tahay in laga sameeyo iyo halkee laga iibsadaa si aysan ugu bixin maal?
Dumar badan oo da 'gaar ah leh ayaa diyaar u ah mid ka mid ah…
Dharka carruurta - sida loo kala sooco, maxay tahay in laga…
Next Dharka carruurta – sida loo kala sooco, maxay tahay in laga sameeyo iyo halkee laga iibsadaa si aysan ugu bixin maal?
Dharka carruurta – sida loo kala sooco, maxay tahay in laga sameeyo iyo halkee laga iibsadaa si aysan ugu bixin maal?